2004 भारतीय महासागर सुनामी इतिहास र यसको पछि
2004 भारतीय महासागर सुनामी
डिसेम्बर 26, 2004, साधारण आइतबार जस्तो देखिन्छ। मछुआरे, पसल, बौद्ध नुन, चिकित्सक डाक्टरहरू, र मल्लहरू - हिन्दु महासागरको वरिपरि चारैतिर, मानिसहरू उनीहरूको बिहानको यात्रामा गए। पश्चिमी पर्यटकहरूले उनीहरूको क्रिसमसको छुट्टी थाईल्याण्ड , श्रीलंका , र इन्डोनेशियाको समुद्रमा उड्यो, तातो उष्णकटिबंधीय सूर्य र समुद्रको नीलो पानीमा उभिन्छन्।
चेतावनी बिना, 7:58 मा, बन्धा को 250 किलोमिटर (155 मील) समुद्री किनारे संग एक गलती, सुमात्रा, इंडोनेशिया राज्य मा, अचानक रास्ता दिए।
गलतीको 1,200 किलोमिटर (750 मील) सँगको दूरीमा909किलोमिटर भित्रको भित्तामा एक909वाटर भूकम्पमा, 20 मीटर (66 फिट) द्वारा माथिल्लो भागका भागहरू बेवास्ता गर्दै र 10 मिटर गहिरो (33 फिट) खुवाउँछ।
यो अचानक आंदोलनले 1945 मा हिरोशिमालाई पराजित गरेको लगभग 550 मिलियन पटक ऊर्जाको असीमित मात्रामा रिजर्व भएको थियो। जब समुद्री सतहमा गोली हल्लायो, ​​यसले हिन्दु महासागरमा विशाल रेशमहरूको श्रृंखला बनायो - यो सुनामी छ ।
उपेन्द्रको लागी नजिकैको मान्छेले विनाशकारी विनाशको बारेमा केही चेतावनी दिएको थियो - पछि सबैले, उनीहरूले शक्तिशाली भूकम्प महसुस गरे। यद्यपि, सुनामीहरू हिन्द महासागरमा असामान्य छन्, र मानिसहरूसँग प्रतिक्रियाको लागि लगभग 10 मिनेट थियो। त्यहाँ सुनामी चेतावनी थिएन।
लगभग 8:08 बजे, अचानक समुद्र सुत्केराको भूकंप विनाशकारी किनाराबाट फर्कियो। त्यसपछि, चार विशाल तरंगहरूको एक श्रृंखला अन्धकार दुर्घटनाग्रस्त भयो, उच्चतम 24 मीटर लामो (80 फिट) मा दर्ज गरियो।
लहरहरू उर्वरहरूमाथि एकपटक पछि, केही स्थानहरूमा स्थानीय भौगोलिकहरूले ती ठूला राक्षसहरूलाई पनि चढाए, लगभग 30 मीटर (100 फिट) लामो।
समुद्री तटले अण्डाले जरायो, इन्डोनेसियाली समुद्र तटका ठूला इलाकाहरूलाई मानव ढाँचामा नखान्ने, र तिनीहरूको मृत्युको अनुमानित 168,000 मानिसलाई टाढा लैजान्छ।
एक घण्टा पछि लहरहरू थाईल्याण्ड पुग्यो; अझै पनि अवांछित र खतरनाक छ भने, लगभग29 200 मान्छे सुनामी पानीले पकडेका थिए, जसमा 2,500 विदेशी पर्यटकहरू पनि छन्।
तरकारीहरू कम-झण्डा मालदीव टापुहरूमाथि ओभररहेका छन् , त्यहाँ त्यहाँ 108 व्यक्तिहरू मारिए र त्यसपछि भारत र श्रीलंकासम्म पुग्यो, जहाँ भूकम्प पछि दुई घन्टापछि थप 5,000 घटेको थियो। लहरहरू अझै 12 मीटर (40 फिट) लामो थिए। अन्ततः, सुनामीले पूर्वी अफ्रिकाको तट सात घण्टापछि मारे। समयको पछाडिको बावजुद अधिकारीहरूले सोमालिया, मेडागास्कर, सेशेल्स, केन्या, तान्जानिया र दक्षिण अफ्रिकाका मानिसहरूलाई चेतावनी दिन कुनै उपाय थिएन। दूर इंडोनेसियालीको भूकम्पबाट ऊर्जा अफ्रिकाको हिन्दु महासागर तटस्थ हुँदै, सोमालियाको पन्तचन्द क्षेत्रमा बहुमत रहेको लगभग 300 देखि 400 सम्मको मान्छे भयो।
कुल मिलाकर 2004 2004 को हिउँ महासागर भूकम्प र सुनामीमा अनुमानित 230,000 देखि 260,000 मान्छे मरे। 1900 पछि भूकम्पले तेस्रो-सबभन्दा शक्तिशाली थियो, सन् 1960 को ठूलो चिली भूकम्प (परिमाण 9। 5) र प्रिन्स विलियम ध्वनि, अलास्का (1 9। 9) मा 1966 राम्रो शुक्रबार भूकम्पबाट पार भयो; ती भूकम्पका दुवै हत्यारा सुनामीहरू पनि प्रशांत महासागर बेसिनमा थिए।
हिन्दु महासागर सुनामी रेकर्ड गरिएको इतिहासमा सबैभन्दा घातक थियो।
डिसेम्बर 26, 2004 मा धेरै जना मानिस किन मरे? सुनामी तटीय आबादीले सुनामी-चेतावनी पूर्वाधारको कमीको साथ संयुक्त यो भयानक परिणाम उत्पादन गर्न एक साथ आउँथ्यो। प्रशांतमा सुनाउणहरू धेरै अधिक सामान्य हुन्छन् किनकि यो महासागर सुनामी-चेतावनी सिरेन्ससँग गाँसिएको छ, यस क्षेत्रमा सरणी-पत्ता लगाउने बयौहरूबाट जानकारीको जवाफ दिन तयार छ। यद्यपि हिन्द महासागर भू-भागमा सक्रिय छ, यो पनि सुनामी पत्ता लगाउनका लागि तारिख गर्न सकेन - यसको भारी आबादी र कम भू-भाग तटीय क्षेत्रहरूको बावजूद।
सायद 2004 सुनेमीको पीडितहरूको ठूलो बहुमत बयू र सार्न्सहरूले बचाउन सकिएन। आखिर, सबैभन्दा ठूलो मृत्युको प्रहार सम्म इन्डोनेसियामा भएको थियो, जहाँ मान्छे भर्खरै ठूलो भूकम्पले हल्लायो र उच्च तह खोज्न केहि मिनेट लागेका थिए।
तैपनि अन्य देशहरूमा 60,000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरू सुरक्षित हुन सक्थे; तिनीहरूले कम से कम एक घन्टा को किनारेलाइनबाट टाढा हुन सक्थे - यदि उनीहरूको केही चेतावनी थियो। 2004 देखि साढे वर्षहरुमा, अधिकारियों ने एक भारतीय महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली को स्थापित और सुधारने के लिए मेहनत की है। आशा छ, यसले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि हिन्द महासागर बेसिनका मानिसहरू फेरि कहिल्यै अनियमित भए तापनि उनीहरूको किनारमा पानी पट्टि 100 फुटको पर्खाल।
बुबा - मुगल साम्राज्य को संस्थापक
अकिडियन साम्राज्य: द वर्ल्डको पहिलो साम्राज्य
शांग वंश चीन को सम्राट
फोटो गैलरी: टियानानमेन स्क्वायर, 1988
सिंथेटिक क्यूबिजको ​​जन्म: पिकासोको गिटार
¿Puedo viajar fuera de Estados unidos con visa यू pendiente o aprobada?
तपाईंको कपाल हन्ना कसरी हाइलाइट गर्ने
गोल्फ शटहरू बायाँतिर जाँदै तर सिधा: दोष र फिक्सहरू
इटालियनमा संयोजन कसरी प्रयोग गर्ने
मेक्सिकन स्वतन्त्रता - गुआनजूटो को घेराबन्दी
2018 मा खरीद गर्न 8 सर्वश्रेष्ठ GRE प्रिप किताबहरु
तपाईंको पावर नावको भाग बुझ्न
Mussolini मा पहिलो हत्या प्रयास
के महिलाले एक बोतलमा पीडित हुँदा पीडित गर्न सक्छन्?
प्राचीन ग्रीक कलाकारहरूको सूची
5 ब्रेकनेटाका लागि पियानो गीत
यसको लागि वीआईपी को लागि टी वी को लागि 60 प्रोफेसरहरु en USA
अहनेन्टफेल: वंशावली संख्यात्मक प्रणाली
"Partager" (साझा गर्न) को सरल संयोजन
नैतिक अहंकार के हो?
स्लासर मूवी अवलोकन र डरावनी फिल्म उप-विधाको इतिहास
एक फाइललाई कसरी पेरलमा डाइरेक्टरीबाट बताउनुहोस्
यदि तपाईं गोल्फ ह्यान्डपप चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई निश्चित अंकको आवश्यक पर्दछ
डरले निको पार्ने प्रार्थना
तेल चित्रकारी प्रविधिहरू: मोटो भरिएको मोटो
सौर ग्रहणको लागि तपाईंको निश्चित गाइड
बुर्ज दुबई / बुर्ज खलीफा मा द्रुत तथ्य
इतिहास: फोटोवोल्टिक्स टाइमलाइन